Allaah baa leh maha­dda oo dhan, Nabigana naxariis iyo nabad gelyo Rabbi xaggi hawga ahaato. Intaa ka dib:website-kani waa mid uu hadafkiisu yahay, in lagu caddeeyo asalka diinteenna ee tawxiidka, kaasoo ah muwduuc aad u muhiim ah, kuna habboon waqtiga aan ku jirno iyo jahliga ay dad badani uga sugan yihiin macnaha sharciga ah ee kelmada tawxiidka لا إله إلا الله.
muhiimada uu leeyahay mowduucaan tawxiidka ah waxaad ka fahmi kartaa in nabiga s.c.w uu 13 sano u taagnaa caddaynta tawxiidka magaalada makka dhexdeeda, qur’aankuna 13-kaas sano waxa uu ka hadlayey towxiidka, iyadoo dadka aan lagala hadlayn mowduuc kale sida axkaamka iyo furuucda tirada badan ee waagii madiina uu qur’aanku lasoo dagayey. arintaasina waxay daliil u tahay muhimada uu leeyahay tawxiidka iyo in uu u baahan yahay waqti badan, cilmi kasta oo la baranayana uu isaga ugu horreeyo.
inagoo ka duulayna arimahaas ayaan go’aansannay in dadka aan ka dhalanay ee soomaalida ah aan ugu faa’iideyno caddayna iyo faahfaahinta kalmada tawxiidka لا إله إلا الله. anagoo allaah swt ku raalli galinayna camalkaan, ugana rajaynayna abaal marin wanaagsan maalinta aakhiro.
website-kanna waxa ku socda dhisme, goor dhowna waxaan rajaynaynaa in lasoo gabagabaynayaa insha
Casharrada aadka loo aqristo
Sidee “Diinta xaqa” ah looga lumi jirey?
Maxaa ka dhalanaya garashada macnaha “Diin”?
“Diin” maxaa la yiraahdaa?
all visitors – 19369:
guests – 19301